🥇 ▷ iPhone 11 Pro iyo Pro Max: ka fikir mar labaad, waxay u iibiyaan sida hotcakes ✅
iPhone 11 Pro iyo Pro Max: ka fikir mar labaad, waxay u iibiyaan sida hotcakes
The iPhone 11 Pro iyo Pro Max ayaa si aad ah u iibinaya si ay u rumaystaan ​​tirooyinka ugu horreeya ee amarrada, 72 saacadood ka dib furitaankoodii. A yaab la yaab leh marka mid ka fikiri lahaa in ay noqon lahayd gaar ahaan jaban iPhone 11 in la kulmi lahaa guulaha ugu. Falanqeeyayaasha ayaa dib u eegaya wadarta guud ee qiimeyntooda iibka.
Marka laga hadlayo sii deynta iPhone, falanqeeyayaasha waxay leeyihiin – waxay noqon kartaa – si dhif ah isha wareega kombuyuutarka. Waxaan ka dhawaajinaynay usbuucii hore dhowr saadaalin oo falanqeeyayaal ah oo saadaaliyay iibka iPhone 11 Pro iyo Pro Max gaar ahaan jilicsan. Si kastaba ha noqotee, tirooyinkii ugu horreeyay ee amar-bixinno 72 saacadood ka dib furitaankoodii, Mareykanka iyo Shiinaha, ayaa u muuqda inay mar kale been sheegaan sannadkan.
The iPhone 11 Pro iyo Pro Max si fiican ayey u iibiyaan si ay u rumaystaan ​​preitors 72h kadib furitaanka
Sidaa darteed falanqeeyaha caanka ah – ugu yaraan isla markaaba aan ka hadalno iPhone – Ming Chi Kuo wuxuu sharraxaad ka bixinayaa qoraal siiya maalgashadayaasha, laga soo bilaabo xogta seddexdii maalmood ee ugu horreysay amar-bixinta, in bilowga uu ka sarreeyo wixii laga filaayay. Laakiin tan ugu yaabka badan ayaa ah heerka baahida dalabka ee ku saabsan iPhone 11 Pro iyo Pro Max – ugu kor u kacsan uguna qaalisan sanadkaan. Iyada oo la wajahay wixii tartan u ahaa jiilka Android, siiba sawir qaadista, taleefankan casriga ahi wuxuu ku badan yahay soo qabashada tikniyoolajiyadda oo aan ahayn “kacaan” dhabta ah.
Laakiin wali waxaa jira qodob sharraxaya: Ming Chi Kuo wuxuu xusayaa inApple uu halkaas ugu tegey si ku-meel-gaar ah milkiilaha isku-darka, ee Mareykanka, inuu ku cadaadiyo isticmaaleyaasha inay iibsadaan. Sidaa darteed, waxaa jira tusaale ahaan barnaamij is weydaarsi waxtar leh, iyo sidoo kale maalgelinta xulashooyinka dhowr qaybood oo bille ah oo qiime eber ah. Ming Chi Kuo wuxuu xusayaa marka lagu daro cabirkaan amarada hore ee muhiimka ah ee Pro iyo Pro Max, baahida loo qabo iPhone 11 inay tahay, sida qofku filan karo, aad u xoog badan.
Falanqeeyaha ayaa sharxaya in baahidaas gaar ahaan Shiinaha ay aad u sarayso. Guud ahaan, faa’iidooyinka iPhone 11 ee qayb ahaan dib-u-cusboonaysiinta – iyada oo isu rogtay ikhtiyaar sare oo ah casriyeyn loogu talagalay isticmaaleyaasha iPhone 6, 6S iyo 7 kuwaas oo si dabiici ah u doonaya inay ku sii nagaadaan deegaanka deegaanka iOS. Markaa, iyadoo qof walbaa ogolaaday mugga iibka ee niyad jabka ah ee loogu talagalay iPhone cusub, inta u dhaxaysa 65 iyo 70 milyan unug, saadaasha ayaa hada kicinaysa tirada u dhexeysa 70-75 milyan unug.
Sidoo kale akhri: iPhone 11 benchmark – la yaab, tartanka Android horeyba waa K.O!
Ming Chi Kuo wuxuu kaloo xusey in uusan sare u qaadin qiimaha iPhone-ka ee sanadkaan, Apple runtiina waxay yareynaysaa xadkeeda lacagaha dagaalka ganacsiga ee ay la leedahay Shiinaha iyo caqabadaha sii kordhaya ee alaabada laga sameeyay Shiinaha ee dib loogu celiyay Mareykanka.
Xigasho: Apple insider